कांग्रेसकै कारण आरोपित न्यायधिसले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना-NepalKanoon.com
कांग्रेसकै कारण आरोपित न्यायधिसले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना
जेठ ६, काठमाडौं । लामो विवादपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाउने पक्का भएको छ । पत्रको व्यहोरामा अझै सहमति भएको छैन । पत्र पठाएपछि यो विवादको अन्त्य कसरी होला ? घटनाक्रम सबै न्यायाधीशको सिफारिस सदर हुने दिशातिर अघि बढेको छ ।
संसदीय सुनुवाइमा आउन अस्वीकार गर्दै न्यायपरिषद्ले पठाएको पत्रमा प्रयोग भएका शब्दहरु आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा केही दिनको विवादपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सहमति भएको छ ।
तर, न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाउँदैमा विवादित न्यायाधीशहरुको सिफारिस रोकिने सम्भावना कम छ । समितिमा भएको छलफलहरु हेर्दा अनुमोदनका लागि आवश्यक २४ सभासद पुग्ने देखिन्छ । त्यसतर्फ इंगित गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्-’रुप पक्ष भनेको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संसद यस्तै खात्र्याक खुत्रुक पक्ष हुन् । सारचाहिँ के हो भन्दा सर्वोच्चले समेत रिपोर्ट गरेका न्यायाधीश राख्ने हो कि होइन ? हामी एकथरि तिनैलाई नराखी नहुने बल गरिराखेका छौं ।’
सभासद केसी सर्वोच्चले कारबाही गर भनेर र विवादित न्यायाधीश अनुमोदनका लागि आवश्यक मत पुगिसकेको बताउँछन् । ७२ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ कांग्रेसका १७ सभासद छन्, जो न्यायपरिषद्को सिफारिसको पक्षमा उभिएका छन् ।
राप्रपासहितका केही साना दलको समर्थन पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । यद्यपि छलफलका क्रममा कांग्रेस सभासदहरुले पनि सुनुवाइका क्रममा अयोग्य लागे अस्वीकार गर्न सकिने बताउँछन् ।
कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने-’अन्तरआत्माले त भन्दो हो नि, एकान्त भएपछि यो यो कुरा गर्न नहुने हो । संसदीय सुनुवाइ भएन भन्ने लाग्दो होला नि । तर, यहाँ भन्न भएन, हामी कहाँ-कहाँ बाधिएका छौं ।’
फेस सेभिङ खोज्दै एमाले-एमाओवादी
सुरुमा न्यायपरिषद् सदस्यहरुलाई बोलाउनेदेखि सिफारिस पुनर्विचार गर्न पठाउनुपर्ने अडानमा रहेका एमाले र एमाओवादीका सभासदहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सेफ ल्याण्डिङको पक्षमा छन् ।
सर्वोच्चले न्यायपरिषद्लाई नबोलाउनु भन्ने आदेश दिएपछि एमाले र माओवादीले सिफारिसको आधार र कारण व्यक्तिगतरुपमा माग्नुपर्ने, समावेशी नभएको विषय उठाएका छन् । यसलाई समावेशीको माग गर्दै आएका साना जातीय तथा क्षेत्रीय पार्टीहरुको समर्थन मिलेको छ । कांग्रेसले न्याय परिषद्लाई पत्र पठाएर दोहोरी खेल्न नहुने बताएपछि एमाले र एमाओवादीले पत्र पठाउनेबारे मतदान गरौं भन्दै प्रक्रियाको कार्ड फालेका थिए । जसले केही काम गरेको छ र कांग्रेस पत्र पठाउन सहमत भएको छ ।
न्यायपरिषद्लाई पत्र काटे पनि नकाटे पनि सत्तारुढ कांग्रेसले चाहने हो भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन्छन् भन्नेमा एमाले र एमाओवादीका सभासदहरु प्रष्ट छन् । onlinekhabar